Meghan Markle dia namela fahatokisana sasany tamin'ny fiainany fony izy reny vao - teles relay
Meghan Markle dia namoaka tsiambaratelo momba ny fiainany fony izy reny vao herotrerony
Resadresaka nifanaovana tamin'ny videoconferensi tamin'ny volana Black History, ny Alakamisy 1 Oktobra lasa teo, i Meghan Markle dia nibolisatra tamim-pahatokisana momba ny fiainany tamin'ny naha reny an'i Archie kely.
Ny Sussex dia mampiasa ny fiainam-baovao mba hidirany bebe kokoa amin'ny tanjona ambony. Ity alakamisy 1 ityer Oktobra, Meghan Markle ary ny Printsy Harry dia namaly fanontaniana avy amin'ny anglisy isan'andro Ny fenitra hariva tamin'ny alàlan'ny kasety video avy tao an-tranony tany Santa Barbara, Kalifornia, tamin'ny fotoana nanombohana azy ny Volan'ny Tantara Black, nolovaina tamin'ny hetsika zon'olom-pirenena tamin'ny taona 1970, araka ny fanazavan'ity lahatsoratra ity avy amin'ny tranonkala Streetpress. Saingy io ihany koa no fotoana tokony hanaovan'ny Duchess of Sussex fitokisana ny fiainany amin'ny maha reny vao herotrerony azy, raha ny zanany kely Archie nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany voalohany tamin'ny 6 Mey 2020.
« Salama tsara izahay Tsara be i Archie", Toy izany solafaka Meghan Markle. Ny zazalahy kely aza dia ho feno hery. “Tena tsara vintana izahay miaraka amin'ilay kely. Be atao be izy, na aiza na aiza. Izy no mitazona antsika handeha. Tena tsara vintana izahay, ”hoy hatrany ny kintana taloha tamin'ny andiana Suits. Le bout de chou aza dia nanao fisehoana tampoka nandritra ny fotoana niasan'ny ray aman-dreniny. Na izany aza, tamin'ny volana aogositra 2020, nanambara izany ny Printsy Harry Archie nandany ny ankabeazan'ny androny tany ivelany, ka namporisika ny rainy hampianatra azy milalao rugby. " Lehilahy kelinay no laharam-pahamehana aminay, fa ny asanay aorian'izay no laharam-pahamehana faharoa ary manandrana manao izay azonay atao izahay mba hanaovana ny anjaranay hahatonga an'izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa. »
Miverina any Angletera amin'ny Krismasy?
Satria, raha ny marina, rehefa tsy eo anilan'ny kely izy ireo Archie, Meghan Markle ary Prince Harry dia mijanona ho mahatoky amin'ny natiora nanolorany tena, nanatevin-daharana, ohatra, ny ady amin'ny fanavakavahana. Ho fanampin'ireo antony mahatonga azy ireo hamorona azy ireo dia tafiditra ao koa ireo lovebirds amin'ny famokarana. Raha tsiahivina dia nanao sonia a fifanarahana $ 100 tapitrisa mahery miaraka amin'i Netflix hamokatra horonantsary, andian-tsary ary fanadihadiana. Maniry ny hanome topy maso ny fiainam-piainany vaovao tsy lavitra ny Firm, afaka manao fampisehoana eo alohan'ny fakan-tsary aza izy ireo raha ny tatitra nataon'ny tabloid vao tsy ela akory izay. Ny masoandro.
Na izany aza, tsy hadinon'izy ireo ny mpanjaka Elizabeth II, na eo aza izany fanakatonana sisintany izay mbola misy ifandraisany manerana ny Atlantika, ny Sussexes dia mikasa ny hankalaza ny faran'ny taona amin'ny mpanjaka. Saingy raha toa ka tratran'izy ireo izy dia mety ho aiza ny tanjon'izy ireo trano mimanda Windsor ary tsy Sandringham. Voalohany mandritra ny 33 taona.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.closermag.fr
Angelina Jolie taksi Hollywood miaraka amina bebek '- Video
Rémy Ngono baikoin'ny governemanta frantsay hiverina any Kamerona